Home » Copy/Paste »်ပညာသင်ရွှေထီး၏ အမှတ်တရ ပုဂံ
select လုပ် ထောင့်ကို ၀ိုင်းအောင်လုပ် ပြီးရင် ထည့် အဲလိုလုပ်တာတော့ တွေ့ဖူးတယ်ဗျို့  … နောက် RAW နဲ့ ရိုက်ထားရင် အဲ့ ဗစ်ဂနက်တင်း ထည့်လို့ရတယ်ဗျ …
နိုက်ကွန်းတွေမှာ Digital Photo Professional လိုမျိုး ..ပါဝါဖူးလ် App
ကျုပ်အမြင်အရ ဆိုရင်တော့ ၊ ကြည့်ရတာလှပါအိ ၊ အကြံပေးရမြီ ဆိုလျှင် ၊ ၅ ပုံမြောက်ထဲမှာ ကားပေါ်မှ ဆင်းလာနေသူလေးများကို ထပ်မံရိုက်မြီ ဆိုလျှင် ၊ အသေးစိတ် အနီးကပ် ဆွဲရိုက် တင်ပြသင့်ကြောင်း ။
ကူးယူလိုလျှင်လည်း ခွင့်တောင်းပါရန် ဆိုတော့
အခုရှုပ်မှ နောင်ရှင်းဆိုသလို ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်မှာဆိုးလို့ရယ်
အော် ဂလိုလား မသိလို့ပါ…ရွာသားအသစ် အမိုက်မဲလေးကို ဗွေမယူပါနဲ့နော်…
ဟဲ့ .. ဗြဲသီး ..
ကိုဂီရေ Mလုလင်ပြောသလိုပါပဲ ၊ photo shop မှာ select လုပ် ထောင့်ကို ၀ိုင်းလိုက်ပြီး ထည့်လိုက်ရင်ရသလို…လိုက်ရွန်း ထဲမှာလည်း select မလုပ်ပဲ ထည့်လို့ရတယ် ….ကိုယ်သန်ရာသန်ရာပေါ့ ကျွန်တော့ အထင် တော့ canon က nikon ထက် app ပိုများလိမ့်မယ်ထင်တယ်…ကင်မရာထဲမှာပါတာကိုပြောတာပါ…3 ပုံမြောက်ဆိုရင် ကင်မရာထဲမှာတင် အဖြူ၊အမဲ ပြောင်းလိုက်တယ်..အဲလို function မျိုး canon မှာလည်းပါမှာပါ…ကျွန်တော်တို့လို filter ၀ယ်တပ် မရိုက်နိုင်တဲ့ သူတွေတော့ အဆင်ပြေတာပေါ့….Nikon Menul ကို ဖတ်ကြည့်လည်းရပါတယ်..
ရိုက်တဲ့ပညာ အပြင် တို့တဲ့ ပညာတွေလည်း ရှဲကြပါဦးဗျာ…
သွားလေသူကြီး ပြောသလို စတေးလ် ဟန်းဂရိ .. စတေးလ် ဖူးလစ်ရှ် ပါ
သဂျီးဆီက သူ ဖတ်ဖတ်နေတဲ့ အမေဒစ်ကင်န် အာ့ထစ် မဂ္ဂဇင်း တို့
ရွာထဲကို ဒါ့ပုံဆရာအသစ်တွေလာလာပြီး ငါ့စိတ်ကိုဆွနေတယ်…
ပညာသင်တစ်ယောက်ရဲ့လက်ရာက တော်တော့်ကိုသေသေသပ်သပ်ရှိလှပါတယ်လို့ ခန့်မှန်းမိ ပါတယ် …….. တစ်ခြားလူတွေကူးယူမှာစိုးလို့နံမည်ထိုးတာကကောင်းပါတယ် ……… ကွန်ပျူတာ desktop တွေမှာတင်ချင်ရင်တော့ ကိုရွှေထီးနံမည်လေးတွေပါနေမှာပေ့ါနော် …….. ကျွန်မကတော့ ပုံတွေကို ဒေါင်းလုတ် လုပ်လေ့တော့မရှိပါဘူး ….. တစ်ချို့လုပ်တတ်ပြီး အလှသုံးချင်သူတွေအတွက်ပါ …… ကိုရွှေထီး ပုံလေးတွေကလှတော့ လိုချင်သူတွေရှိမှာပါ ……..
မခိုင်ခိုင်ရေ ကျေးဇူးပါ..ကိုယ်ကိုတိုင် အပင်ပန်းခံရိုက်ပြီး သူများနာမည်ကောင်းယူတာတော့ ဘယ်ကောင်းမလဲနှော့ …ဒါကြောင့်မို့ပါ ပုံလေးတွေလှတယ်ဆိုလို့ ကျေးဇူးပါ..
တကယ့် လက်ရာကောင်းတွေပဲ။ နောက်တစ်ချက်က ပုံတွေကို ရိုက်တဲ့အခါ အမြင်ရှုထောင့်အမျိုးမျိုးကလည်း ရိုက်တတ်ဖို့လိုတယ်နော်။ ခုဆို ပုံတွေအတွက် ဘယ်နေရာကနေ ဘယ်လိုကက်သတ်ရိုက်ရတာလည်းဆိုတာလည်း သိချင်မိသားရှင်။ ပုဂံကို နှစ်ခေါက် ရောက်ဖူးပေမယ့် သွားလာလည်ပတ်ရင်းနဲ့သာ အချိန်ကုန်နေမိတော့တာ။
အနုလက်ရာ အာနန္ဒာ ဆိုတဲ့ အတိုင်း
အရင့်ရောင်ပြောမှပဲ အာနန္ဒာ ဘုရားပုံကိုလိုက်ရှာတာ ပုံကောင်းကိုမတွေ့တော့ဘူး..ကျေးဇူးအရင့်ရောင်ရေ…နောက်တစ်ခေါက်သွားမှပဲ သေသေချာချာရိုက်ခဲ့တော့မယ် …အခုရိုက်ခဲ့တဲ့ ပုံတွေက အချိန်မနည်းလုရိုက်ခဲ့ရတာပါ..
အာ ခွင့်တောင်းထားတဲ့ပုံ မပေးဘူးလားဗျာ ..
ဟာ မဟုတ်ပါဘူးဗျာ ယူပါရပါတယ်….
ပုဂံပြည်ကြီးက……“ရွှေထီး” လက်ထဲေ၇ာက်မှ ပိုပြီးတော့မှ
နောက်တခါ ဒါ့ပုံတင်ရင် ဒစ်စခရစ်ပ်ရှင် လေးတွေထဲ့ပေးပါဗျာ။ ဒီကလူက ပုဂံကို ဘုရားဖူးထွက်တယ်ဆိုပြီး နံမယ်ကောင်းတပ်သွားပေမဲ့ ကိုယ်ဖူးခဲ့တဲ့စေတီဘွဲ့တော် ပြန်မေးရင် တော်တော်နဲ့ ဖြေနိုင်တာမဟုတ်ဖူး။ ဦးနှောက်က ခပ်ချာချာရယ်။ Anyway ဒါ့ပုံတွေအားလုံး ကောင်းမှကောင်းဗျာ။
ဒါမှရွှေထီးတဲ့ကွ…တစ်ထီးတည်းရှိ…အဲ…တစ်လက်ထဲ ရှိတာလားဟင်း….နှစ်လက်ရှိရင် တစ်လက်လောက်ပေးပါလား….
စနိုးဓာတ်ပုံအကြောင်းနားမလည် မသိမတက်ပါဒါပေမယ့် ပုံလေးတွေကြည့်ရတာ ကြည်လင်တယ် ပုံက ရှင်းလင်းပြတ်သားတယ် ကြည့်ရတာ တကယ်ကိုပုံကောင်းတွေ ကိုကြည့်ခွင့်ရတာအနှစ်သာရ ရှိလှပါပေတယ်။။
ကိုရွှေထီးရေ လှလိုက်တဲ့ ရိုက်ချက်တွေဗျို့ ။